China Green Tea Chunmee 9371 fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
Chunmee tii 9371
Iyo chunmee tii 9371 (chiFrench: Thé vert de Chine) rave rakakura rekisheni tii chikamu. Inonyanya kutumira kuAlgeria, Morocco, Mauritania, Mali, Benin, Senegal, Uzbekistan, Russia, nezvimwe.
Green tii chunmee
Dunhu reSichuan, China
Tambo yakaomarara, yunifomu yakaenzana
Chinovava zvishoma pakutanga sip, ipapo chinotapira zvishoma
25g, 100g, 125g, 200g, 250g, 500g, 1000g, 5000g kuti bepa bhokisi kana gaba
1KG, 5KG, 20KG, 40KG yemapuranga kesi
30KG, 40KG, 50KG yepurasitiki bhegi kana bhegi repfuti
Chero humwe kuputira sezvinodiwa nevatengi zvakanaka
YIBIN SHUANGXING TI INDUSTRY CO., LTD
Ramba uri munzvimbo yakaoma uye inotonhorera yekuchengetedza kwenguva refu
Chitupa chehunhu, Chitupa chePhytosanitary, ISO, QS, CIQ, HALAL uye nezvimwe sezvazvinodiwa
Mazuva makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu mushure mekurairwa kwemashoko
Chunmee tii inokohwewa kubva kune rimwe bundu rimwe shizha uye rimwe budhu mashizha maviri kubva kuQingming kuenda kuGuyu sezvinhu zvakagadzirwa, uye inogadzirwa zvakanaka. Hunhu hwayo hunhu ndewekuti: mitsetse yacho yakanaka kunge tsiye, ruvara rwakasvibira uye rwune mafuta, hwema hwacho hwakareba uye hunogara kwenguva refu, kuravira kuri kutsva uye kunotapira, muto wakasvibira uye wakajeka, uye pasi peshizha rakapfava uye girinhi. Mabasa e chunmee Tea:
▪ Kurwisa kukwegura.
▪ Mishonga inorwisa mabhakitiriya.
▪ Dzikisa ropa lipids.
▪ Kuderedza uremu uye kuderedza mafuta.
▪ Dzivirira kuora kwemazino uye kufema mweya wakaipa.
▪ Kudzivirira kenza.
▪ Kuchenesa uye kuchengetedza UV.
▪ Inogona kugadzirisa kusagadzikana.
Unoziva Burkina Faso?
Burkina Faso (French: Burkina Faso), nyika yakavharirwa muWest Africa, muganho wese uri kumucheto kwekumaodzanyemba kweSahara Desert. Zita renyika "Burkina Faso" zvinoreva "nyika yevanababa", ichibatanidza mutauro mukuru wemuno we burkina (zvichireva kuti "vanababa") muna Moses nefaso (zvichireva "nyika") muBambara. Guta guru Ouagadougou iri pakati chaipo penyika.
Iri ndiro guta rakakura kwazvo munyika uye tsika nemagariro. Burkina Faso ine mwero wepasi pasi wekuverenga nekunyora, iine chete 23% yevagari vemo vanogona kuverenga. Burkina Faso ndiyo imwe yenyika dzisina kusimukira (nyika dzisina kusimukira) pasi rose. Inovhara nharaunda yemakiromita mazana maviri nemakumi manomwe emakiromita uye iri padyo neMali, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin neNiger.
Kufambisa kweBurkina Faso nehupfumi
Mune zvehupfumi, nyika ino yakanangana nekurima nekuchengetwa kwemhuka, kuverengera chikamu chinosvika makumi masere muzana chevashandi venyika, uyezve mutengesi mukuru wevashandi vekunze kune dzimwe nyika dzemuAfrica dzakavakidzana. Muzinda, pane dzimbahwe remakambani madiki emaindasitiri nekutengesa akadai sekugadzirisa michini, kugadzira machira, kusona, kupura mupunga, hwahwa, nezvimwe. Zvizhinji zvezvinhu zvekutengesa kunze senzungu, donje uye zvipfuyo zvezvipfuyo munzvimbo yepakati nekuchamhembe kwe nyika yakagoverwa pano.
Njanji chete mudunhu iri kuenda kuCôte d'Ivoire, saka ine hukama hwepedyo nenyika. Burkina Faso inhengo yeAfrican Airlines; asi zvinotengeswa kunze kwenyika neBurkina Faso neChina zvinonyanya kutakurwa neBeijing Fanyuan International Transport Service Co, Ltd., iyo inobvumidzwa neEthiopia Airlines, uye Ouagadougou ine maitiro epasi rese.
Huwandu hwevanhu huri mamirioni gumi nemashanu (2012). Kune anopfuura makumi matanhatu madzinza uye mutauro wepamutemo chiFrench. 20% vanotenda muIslam, uye gumi muzana vanotenda muchiPurotesitendi nechiKaturike. Mari yazvino inoshandiswa nenyika iFranc CFA, inobuditswawo neWest Africa Economic and Monetary Union (L'Union économique et monétaire ouest-africaine) yakagadzwa pamwe nenyika idzi. Huwandu hwekutengesa pakati peChina neBurkina Faso muna 2007 hwaive hunosvika US $ 200 miriyoni, kudzikira-pagore kwe6,4%, iyo yaitengeswa neChina yaive US $ 43.77 miriyoni uye yaitengeswa yaive US $ 155 mamirioni. China inonyanya kutengesa zvigadzirwa zvemagetsi uye zvemagetsi kuBurkina Faso uye kupinza donje.
Tea inopinza muBurkina Faso
Yakajairwa tii kurongedza: 25g bepa bhokisi kana madiki mabhegi eti tii kurongedza zviri nyore kuzvitoro kana canteens kune zvekutengesa.
Green tii mhando: yepakati uye yakaderera-magumo chunmee tii, uye pfuti tii 3505.
Kazhinji nhamba dzetii: 8147, 41022,3505
Mahoridhe uye tsika taboos muBurkina Faso
Mazororo makuru: Zuva reRusununguko: Nyamavhuvhu 5; Zuva reNyika: Zvita 11.
Vanhu veBurkina Faso vane hunhu kwazvo kana vachiona vashanyi vekunze, vanoratidzika kunge vane hushamwari, vane rupo uye vane hunhu, vachivadaidza kuti "Mr.", "Wako Akanaka", "Mai", "Mai", "Miss", nezvimwe. maoko nevaenzi vechirume, uye kwazisai vashanyi vechikadzi nekunyemwerera, kugutsurira musoro, uye kukotama.
Panzvimbo dzekushamwaridzana, vashanyi vekunze vanoona Burkina Faso vanogona kudaidza varume "Mr." uye vakadzi "Mai", "Mai" kana "Miss" pavanoona zita revanhu veBurkina Faso kana kwete, uye vanogona kutora danho rekukwazisana nevarume. Iwe unogona kukotama zvishoma kuratidza kukwazisa kuvakadzi. Mamwe madzinza muBurkina Faso anorambidza vanhu kudaidza mambo kana chinda zvakananga. Chaiyeuchidzo: Burkina Faso vanhu havadi kutorwa mifananidzo vachida. Usati watora mifananidzo yavo, iwe unofanirwa kuwana mvumo navo.
Pashure: Green Tea Chunmee 4011
Zvadaro: Green Tea Chunmee 9369
4011 Yakawedzera Chunmee Green Tea
Batsiro Chunmee Green Tea
JASMINE Tea-AA China ruva tii